ချစ်ကြည်အေး: ဘာလီ ခရီးစဉ်-၇
မယ့်ကိုး Tue Apr 20, 10:14:00 PM GMT+8
မမတောင်ယာစိုက်ခင်းပုံလေး တစ်ပုံ ယူပါရစေလို့ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်။
blog မှာ တင်ဖို့ မဟုတ်သလို ဘယ်မှာမှလည်း မတင်ပါဘူး။ ကျောင်းစာမှာ mood photo အနေနဲ့ ပြချင်လို့ပါ...
ချစ်ကြည်အေး Tue Apr 20, 10:16:00 PM GMT+8
ညီမ မယ်ကိုးရေ ယူပါကွယ် လိုတာသာ ယူပါ...တို့က တို့ဓါတ်ပုံလာ တောင်းတယ် မှတ်တာ...ဟင်းဟင်းဟင်း...:)
အင်ကြင်းသန့် Tue Apr 20, 10:29:00 PM GMT+8
ဟုတ်တယ်မမ...ညီမလေးလည်း တောင်ယာ စိုက်ခင်းပုံလေးတွေကို အရမ်းသဘောကျမိတယ်...တကယ်တော့ စိုက်ခင်းလှတာထက် ရိုက်တဲ့သူတော်တာပါ.... (မြှောက်တာ မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ မြှောက်ဖြစ်အောင်ကို မြှောက်သွားပါသည် .... မကြိုက်လျှင် နောက်တစ်ခါ မမြှောက်ပါ... ချီရုံပဲ ချီပါမည်... :D :D
SHWE ZIN U Tue Apr 20, 10:47:00 PM GMT+8
သူငယ်ချင်း ရေ ချောင်းပေါက်တော့မယ် အခုလေးတင် ဖတ်လာတာ ဟော အခု တပို့စ် ...
ဒို့တွေလည်း လိုင်းမကောင်းလို့ သိတ်မရောက်ဖြစ်ဘူး အခုမှ လျှောက်စုဖတ်နေရတယ် ပုံလေးတွေကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း
ဇွန်မိုးစက် Tue Apr 20, 11:20:00 PM GMT+8
စိုက်ခင်းပုံတွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ သိပ်လှတာပဲ အစ်မရေ။
ခရီးစဉ်-၈ ကို မျှော်နေပါသည်။
မိုးဦးစံပယ် Wed Apr 21, 12:28:00 AM GMT+8
မမ..လှေကားထစ်စိုက်ခင်းမှာ အုန်းပင်တွေပေါက်နေတာတော့ အမြင်တမျိုးဆန်းတယ်နော်။ မိုးဦးတို့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာလဲ လှေကားထစ်စိုက်ခင်းရှိပေမယ့် ရှုခင်းက တမျိုးစီလှတယ်။
Anonymous Wed Apr 21, 01:00:00 AM GMT+8
ခွိခွိ... သားသားကို နှစ်ပုံလောက် ပို့ပေးစ်စ်စ်စ် (လူပုံပါ)
Mr.Nice Guy ဆိုပဲ.. ဟိဟိဟိ ...
ကိုဇော် Wed Apr 21, 01:53:00 AM GMT+8
အပေါ်က တစ်ယောက်က ပြောလို့ပါ. . .
Mr.Nice Guy ဆိုတော့ “ လူခေါင်းကြီး ” လို့ ဘာသာပြန် ရတာလား . . ဟင်. .ချစ်မကြီး။
ချစ်ကြည်အေးရဲ့ ရိုက်ချက် တွေကတော့ လွှတ်မိုက်ပါ့ဗျား. .
ကျနော်တို့ မင်္ဂလာဆောင်ကျရင်လည်း ဓါတ်ပုံဆရာ အဖြစ် ကြိုငှားထားပါရစေ. . . ( ကြွားထားတာ ကြုံတုန်းလေး . .ငါကွ )
ဓါတ်ပုံအတွက် အမြင်တွေကတော့ အရမ်းကောင်းတယ် အမရေ. .
ဒဏ္ဍာရီ Wed Apr 21, 10:37:00 AM GMT+8
ချစ်မရေ..... ဘာလီခရီးစဉ်က ပုံလေးတွေ ကြည့်သွားတယ်။ သူတို့ဆီက စိုက်ခင်းလောက်ကတော့ ပျင်းတောင် ပျင်းသေးနော်။း)
ဒါပေမယ့် စိုက်ခင်းက ပုံစံတော့ ကွဲတယ်နော် မမ။ ရေအိုင်လေးတွေထဲမှာလိုပဲ လှတော့လှတယ်။
ဓါတ်ပုံ လာတောင်းပါတယ်။ မေလ်းနဲ့ ပို့ပေးပါ။း))
အဆိပ်သင့်သူ Wed Apr 21, 11:11:00 AM GMT+8
မောင်မိုး Wed Apr 21, 12:15:00 PM GMT+8
ပုံတွေကို ကြည့်ရတာ ထိုင်းနံ့သင်းသလိုပဲ။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေက ယဉ်ကျေးမှုချင်း ကူးလူးဆက်နွယ်နေလို့လားမသိဘူး။ စကားမစပ်ဗျာ။ လူပုံကိုတော့ မတောင်းတော့ပါဘူး။ တော်ကြာ ကဗျာရွတ်ပြနေမှာစိုးလို့။
rose of sharon Wed Apr 21, 02:21:00 PM GMT+8
လူပုံလိုချင်တယ်... emailမတို့တော့ဘူး... ဒီကနေဘဲမှာသွားတယ်... မမေ့နဲ့နော်... ဝယ်ချင်စိတ်မရှိ်ရင်လုံးဝမဝယ်နဲ့ ... အားပေးတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်...
မြစ်ကျိုးအင်း Wed Apr 21, 02:58:00 PM GMT+8
ပန်းကနုတ်တွေနဲ့ ငွေထည်လက်ရာတွေကို ကြည့်ရရုံ သက်သက်နဲ့ကို နှစ်သက်တယ်။ အင်းလေးသွားတုန်းက ဟဲယာရွာမ ကိုရောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီက အိမ်ကြီး တစ်အိမ်မှာ ရှေးဟောင်း ငွေထည် လက်ရာတွေကို မှန်ဘီဒိုတွေနဲ့ ထည့်ရောင်းထားတာ ကြည့်လို့ကို မဝဘူး။
အစ်မတို့ စုံတွဲက လိုက်ဖက်တယ်လို့ ပြောရမယ်။
နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က လူဆိုးဖြစ်ရမယ်လေ။
ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာတောင် အမွှာညီအကို နှစ်ယောက်မှာ တစ်ယောက်က ရဲ ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်က လူဆိုး ဖြစ်ပေးရတယ်။ ဒါမှ ဇာတ်က ကြွလာမှာလေ။ မိဘနေရာ အခန်းတွေမှာတောင် တစ်ယောက်က ဆူပူတတ်ပြီး တစ်ယောက်က ကာဆီးပေးတာ မျိုးပေါ့။
မဟုတ်ရင် သားသမီးတွေက နှစ်ယောက်လုံးကို မကြောက်ဘူး ဖြစ်သွားမှာ။
ဒါကြောင့် အစ်မတို့ စုံတွဲက လိုက်ဖက်ပါတယ်း)
မယ့်ကိုး Wed Apr 21, 07:15:00 PM GMT+8
မမ ဓာတ်ပုံကို အိမ်တိုင်ရာရောက်လာတောင်းမယ်နော် :D
မောင်မောင် Wed Apr 21, 10:02:00 PM GMT+8
အင်ဒိုနီးရှား ကို ၂၀၀၇ လောက်က ခဏရောက်ဖူးတယ်ဗျ။
ကိုတာဘာရူ တစ်ဖက်ကမ်း မှာရှိတဲ့ ဆီအုန်းစက်ရုံ ကိုခဏသွားခဲ့တာပါ။
ဂျာကာတာလေဆိပ် မက်ဒေါလ်နယ်မှာ ကြက်ကြော်တစ်တုံး ကို ၂၅၀၀၀ ရူပီယာ၊ ဆင်းကတ် က ၈၀၀၀၀ ရူပီယာ၊ လေဆိပ် တက်စ် က ၁ သိန်း ကျပါတယ်။
ဘင်ဂျာမာဆင် လေဆိပ် ကနေပြီး တော့ ဟိုတယ် ကို ကားငှားတာ
၇သောင်းခွဲ နဲ့ ဟိုတယ် အခန်းခ က ၃ သိန်းခွဲ ပေးရပါတယ်။
ကျွန်တော်က အဲဒီမှာတော့ မီလီလျံနာပေါ့ဗျာ။ ဟဟဟ
ဘာလီ ကိုသွားဖို့ အချိန်မရတော့သလို ပဲ လေယဉ်လက်မှတ်ကလဲ ရက်ရွေ့ မရတော့ဘူးလေ။ :(
ကိုတာဘာရူ က ရွာလေးမှာတော့ ဖီးကြမ်း ငှက်ပျောသီးစားခဲ့ ရပါတယ်ဗျ။
မြို့ လေးတစ်ခုမှာ ပက်ပ်စီ ၀ယ်သောက်တော့ ဆိုင်ရှင် ကောင်မ
လေး က အင်ဒို လူမျိုးမှတ်ပြီး သူတို့ ဘာသာနဲ့ ချည်းပြောနေတော့တာ။
အဲဂလိုလဲ ရုပ်တွေ က အတော်ဆင်တယ်ဗျာ။
အရှေ့ တောင်အာရှသားတွေ မို့ ထင်ပါ့။
စောင့်နေပါတယ်။ အပိုင်း ၈ ကို ပေါ့။
TZA Wed Apr 21, 10:41:00 PM GMT+8
လူဆိုးမကြီး လုံးလုံး ကို လာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း Thu Apr 22, 11:40:00 AM GMT+8
ငါ့နှမတွေကို ဟာသမယ်တွေအောက်မေ့မိတာ မှားပြီ...
ဟိုတယောက် ရွှေစင်ကလဲ ခါးပိုက်နှိုက်..အခု ဒီတယောက် မယ်ချစ်ကလဲ လူဆိုးမကြီး..ဆိုပဲ
မြတ်မွန် Thu Apr 22, 03:32:00 PM GMT+8
Nge Naing Thu Apr 22, 08:24:00 PM GMT+8
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ရိုက်ထားတာ စိုက်ခင်းပုံလေးတွေ သိပ်ကောင်းတယ်နော့်။ ကိုယ်နဲ့ မစိမ်းဘူးဆိုပေမဲ့ စိုက်ခင်းတွေ မတွေ့ဖူးတာ ကြာနေပြီ။ ကျွန်မလည်း ဒီလိုခရီးသွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တာ သိပ်ဝါသနာပါတယ်။ ကင်မရာမကောင်းလို့လားမသိဘူး တခါမှ ဒီလိုပုံကောင်းကောင်းမရဘူး။
Anonymous Thu Apr 22, 09:40:00 PM GMT+8
မြသွေးနီ Sat Apr 24, 01:03:00 PM GMT+8
အယ်... ဘာလီက လာဦးမည်ဆိုပါလား..။
မဟုတ်ရင် လူက ဆန့်တငံ့ငံ့နဲ့...။